Tsidiho ny Britain Now ary Azonao atao ny miditra ao amin'ny CEO ETOA Tom Jenkins Manana "Cold"
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Tsidiho izao i Britain ary afaka miditra ao amin'ny CEO CEO ET Jen Tom Jenkins manana "Cold" ianao
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Kolontsaina • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • LGBTQ • fivoriana • Vaovao • People • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao farany momba ny UK • Video
Tsidiho izao i Britain ary afaka miditra ao amin'ny CEO CEO ET Jen Tom Jenkins manana "Cold" ianao
Ny World Tourism Network dia nampiantrano Q&A niaraka tamin'ny filoha lefitra mpanatanteraka mitsidika an'i Britain Gavin Landry sy Tom Jenkins, CEO an'ny ETOA. Ny sekretera jeneralin'ny UNWTO teo aloha Dr. Taleb Rifai ary mpiara-manorina sy manam-pahaizana Dr. Peter Tarlow dia niditra ho mpikotrana roa, raha ny filohan'ny WTN Juergen Steinmetz kosa niara-niasa tamin'i Blanca.
Miaraka amin'ny famerana napetraka manerana an'i Angletera, ny fiainana ara-dalàna dia mety mbola eo am-piatoana, saingy tsy midika izany fa tsy afaka mizaha ny tontolo ambanivohitra mahafinaritra an'i Britain ianao, mivezivezy eny amoron'ny morontsirak'i Britain, ary mahita ireo mari-toerana manan-tantara any Angletera indray.
Io fiatoana kely hijerena an'i Angletera io dia niova androany ho an'ireo mpitsidika avy any Etazonia sy ny ankamaroan'ny firenena eropeana.
Tom Jenkins, tale jeneralin'ny Fikambanan'ny fizahan-tany eropeana (ETOA), nanatevin-daharana ny Q&A androany miaraka amin'i Gavin Landry, filoha lefitra mpanatanteraka, The Americas, ho an'ny Tsidiho Grande-Bretagne.
Nanatevin-daharana ny biraony ao New York i Gavin, raha tany Newcastle, Angletera kosa i Tom, handeha ho any amin'ny trano fivarotana anglisy mahazatra.
Afaka niaraka tamin'ny namany amerikana indray izy izao.
Ireo mpandeha amerikana, miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminy eropeana, izay vita vaksiny feno na afaka mampiseho fitsapana PCR, dia avela hankafy ireo tranonkala maro natolotr'i Britain an'ireo mpitsidika azy ireo indray.
Dr. Peter Tarlow, mpiara-manorina ny WTN, dia nilaza hoe: “Izao no fotoana hitsidihana an'i Britain. Tsy mbola hipoka ity, ary vonona sy faly ny rehetra hihaona aminao - ilay mpitsidika. ”
Henoy ny Q&A maharitra adiny iray androany momba izay azo atao sy izay mbola tsy azo tohanan'i Vokatra elite ary Profiles of Bermuda.
Ny manidina any UK avy any amin'ny firenena manerantany dia mora amin'ny London Heathrow ny seranam-piaramanidina lehibe indrindra any Eropa ary mifandray tsara amin'ny London afovoany. Ny seranam-piaramanidina iraisampirenena manan-danja any Angletera dia misy London's Gatwick, Stansted, ary Luton; any avaratry Angletera - Manchester ary Newcastle; any andrefan'i Angletera - Birmingham; any Wales - Cardiff; any Ekosy - Glasgow ary Edinburgh; ary any Irlandy Avaratra - Belfast.
Hoy ny tranokalan'ny Visit Britain: Ny trano fisotroana nentinay sy trano fonenanay dia manantena ny handray tsara anao ny Britanika rehefa afaka mandeha indray izahay rehetra, ary mandritra izany fotoana izany dia mbola afaka manadihady ny lovantsika ianao, mifaly amin'ny kolontsainay, ary mihady lavitry ny sakafon-tsakafontsika avy lavitra. Zahao ny lahatsoratray farany na miverena mankany amin'ny fantsom-piarahamoninay raha mila toro-hevitra bebe kokoa sy zava-poana - izany rehetra izany no ilainao an-tsaina ny tena tsiro an'i Britain.
Ny filohan'ny WTN Juergen Steinmetz dia nilaza fa tsy mbola nisy fotoana tsara kokoa hihaonana mivantana, ka nanaiky ny mpandray anjara androany hihaona amin'ny W ho avyorld Travel Market any London (31 Oktobra- 1 Novambra) arahin'ny fampirantiana IMEX America MICE any Las Vegas (9-11 Novambra).
Hita bebe kokoa momba ny Network Tourism Network sy ny fomba hidirana amin'ity tambajotra manerantany amin'ny firenena 128 ity www.tv.travel